Kukhalwa ngamaphoyisa ‘ashaye’ izitabane | Isolezwe
Kukhalwa ngamaphoyisa ‘ashaye’ izitabane
Izindaba / 12 April 2018, 11:56am / ZANELE MTHETHWA
BATHI bazoludlulisela kwikhomishini yezokulingana udaba lokuhlukunyezwa kukaMnuz Vincent Nkosi oshaywe ngamaphoyisa emcwasa ngokobulili oshuthwe noMnuz Sbo Khumalo olwela amalungelo abathandana nobulili obufanayo
BAYAVEVA abenhlangano elwela abathandana nobulili obufanayo ngezinsolo zokuthi amaphoyisa ashaye abesilisa ababili, bavalelwa esiteshini ngoba becwaswa ngobulili.
UMnuz Vincent Nkosi (24) waseChesterville ongumfundi eRegent Business School eThekwini, uthi usahlukumezekile ngenxa yalesi sigameko esenzeke ngoLwesine olwedlule ngasebhishi eThekwini. Wayehamba nomngani wakhe wasePitoli uKgotatso obevakashile ngamaholidi eThekwini. Elandisa ngokwenzeka, uNkosi uthe babezihambela ngasebhishi ngesikhathi kuqhamuka amadoda amabili eza kubona sekukhona akukhipha emaphaketheni.
“Indawo esasihamba kuyo ayiphephile, yingakho sacabanga ukuthi yizigebengu ezizosibamba inkunzi. Sabaleka ngokuhlukana nomngani wami, omunye wesilisa weza kimina wazibiza ngephoyisa. Wakhipha isibhamu wabuza ukuthi ngibalekelani engibiza ngesitabane, wangidonsa ngebhande lebhulukwe wangishaya. Wangilalisa phansi emgwaqweni esaqhubeka nokungithuka.”
Uthe wabona lona omunye wesilisa esebuya nomngani wakhe embambe ngesidlozana, bobabili bafakwa evenini yamaphoyisa. Uthe bahanjiswe esiteshini samaphoyisa esingumahambanendlwana esisebhishi.
“Safica kukhona owesifazane osekhulile kuleli gumbi, bamtshela ukuthi akaphume ukuze basiqondise kahle. Umngani wami unezwi elincane njengowesifazane, bekuthi uma ekhuluma bamthethise bathi akakhulume njengendoda. Umngani wami ucele nokushayela unina ucingo, banqaba bathi nguyena omvumele ukuthi abe yisitabane. Bebelokhu bengishaya ngezimpama, bangibuza nangeselula asesikhwameni sami bethi ngiyintshontshile,” kuchaza uNkosi othe lawa maphoyisa abuza ukuthi ngesikabani isithombe sowesilisa esikwiselula yakhe, wabatshela ukuthi ngesomuntu athandana naye.
“Bathi bazongibophela kwakona lokho ukuthi indoda yami ngiyibhangqile ngoba ngihamba nenye indoda. Kwale noma ngibatshela ukuthi uphathina wami uyazi ukuthi ngihamba nomngani wami,” kusho uNkosi.
Uthe umngani wakhe udedelwe kuqala esiteshini, yena babuye bamdedela kamumva. Bavule icala lokushaywa nelokucwaswa esiteshini samaphoyisa ePhoyinti.
Okhulumela iDurban Lesbian and Gay Community and Health Care uMnuz Sbo Khumalo uthe: “Kuyasidumaza ukuthi sigubha inyanga yenkululeko kodwa kusekhona abantu abangawahloniphi amalungelo abanye. Okusithusa kakhulu ukuthi kuthinteka abantu abazi umthetho. Sizolulandela lolu daba futhi sizocela izeluleko kwikhomishini yamalungelo abantu nakwikhomishini yezokulingana ngobulili ngoba sifuna ubulungiswa,” kusho uKhumalo.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uLieutenant Colonel Thulani Zwane uthe kuphenywa icala lokushaya emuva kokuba abesilisa ababili behlaselwa abasolwa ababafaka evenini yamaphoyisa kodwa ababengawugqokile umfaniswano womsebenzi.